Yemen oo rabto in lasoo nooleeyo Isbaheysiga "Sana'a Coalition"
Yemen oo rabto in lasoo nooleeyo Isbaheysiga “Sana’a Coalition”
Madaxweynaha Yemen Abdu Rabo Mansour Hadi ayaa sheegay in uu doonayo dib usoo nooleynta Isbaheysiga Sanca oo ay ku mideesnaayeen dalalka Ethiopia, Sudan, Yemen, Djibouti iyo Somalia.
Wakaalada wararka Yemen Saba, ayaa faafisay wadahadalo qadka telfoonka ku dhexmaray madaxweynaha Yemen Cabdu Rabu Masuur Haadi iyo Madaxweynaha Ethiopian Girma Wolde-Giorgis kaasi oo uu Hadi ku sheegay ahmiyada ka shaqeysiinta isbaheysiga iyo horumarintiisa.
Waxaa lagu waday kulanki ugu danbeeyey ee Isbaheysiga inuu magaalada Sana’a ee xarunta dalka Yemen ka dhaco dhamaadki 2010 ama bilowga sanadki 2011, laakin waxaa dib loogu dhigay qalalaasihi ay dhawaan usoo joogtay Yemen.
Ujeedada Isbaheysiga Sana’a ayaa ah xoojinta amaanka, xasiloonida iyo iskaashi laga yeesho la dagaalanka Burcad Badeeda ee Geeska Africa, laakin Eretria ayaa u aragta mid iyada lagu faquuqayo inkastoo marar badan lagu casuumay.
Yemen ayaa ka mid ah dalalka sida aadka ah ay u saameeyeen burcad badeeda iyadoo donyo iyo maraakiib ay leedahay dhoowr jeer lagu bartilmaameedsaday gacanka Cadmeed.
Warbaahinta ayaa sheegtay in la afduubay 57 markab halka 225 kalana ay guuldaresteen kuwaas oo dhamaantood ka dhacay biyaha Yemen sanadki 2010 oo kaliyah.